စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ပေးတာ နည်းနေသေးလို့များလား
Home ဆောင်းပါးများ ပေးတာ နည်းနေသေးလို့များလား
Post under ဆောင်းပါးများ at 1/15/2010 11:43:00 AM Posted by nyo
၁၉၇၂ ခုနှစ်က စင်ကာပူခရီးသွားလာရေး အရာရှိက စင်ကာပူဝန်ကြီး လီကွမ်ယုကို အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့တယ်။
စာထဲမှာ “ငါတို့စင်ကာပူဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံလို ပိရမစ်မရှိဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံလို ဂရိတ်ဝေါမရှိဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံလို ဖူဂျီတောင် မရှိဘူး။ ဟာဝိုင်ရီလို ၁၀မီတာ အမြင့်ရှိတဲ့ လှိုင်းတွေမရှိဘူး။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ၁၂ရာသီလုံး ပူပြင်းတဲ့ နေရောင်ခြည်ကလွဲလို့ ဘာမှထူးဆန်းတာ မရှိဘူး။ ခရီးသွားလာရေးအတွက် ချဲ့ထွင်မယ်ဆိုရင် ခက်ခဲလိမ့်မယ်”လို့ ရေးထားတယ်။
၀န်ကြီး လီကွမ်ယုက စာဖတ်ပြီး ဒေါသထတော့တယ်။ နောက် စာတစ်စောင်ရေးပြီး ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ စာထဲမှာ ဒီလိုရေးထားတယ်။
“ဘုရားသခင် ငါတို့ကို ပေးထားတာ မလုံလောက်သေးဘူးလား! နေရောင်ခြည်... နေရောင်ခြည်သာရှိရင် ငါတို့ လုံလောက်ပြီ”
အဲဒီနောက် စင်ကာပူဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရတဲ့ နေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး သစ်ပင် ပန်းမာလ်တွေ စိုက်ခဲ့တယ်။ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ လှပတဲ့ပန်းဥယျာဉ် မြို့တော်အဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး အာရှတိုက်မှာ တတိယ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်။
နိုင်ငံတိုင်း၊ နေရာတိုင်း၊ လူတိုင်းကို ဘုရားသခင်က ပစ္စည်းများများစားစား မပေးခဲ့ပါဘူး။ နယူတန်ကို ပန်းသီးတစ်လုံးပဲ ပေးခဲ့တယ်။ ဒါတောင် သေချာပေးတာ မဟုတ်ဘဲ ပစ်ချပေးခဲ့တယ်။ ဒစ်စနီကို ကြွက်တစ်ကောင်ပဲ ပေးခဲ့တယ်။ ဒါတောင် ဒစ်စနီကိုယ်တိုင် စားစရာ ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်တောင် မရှိတဲ့အချိန်မှာ ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ တရုတ်ပြည် ဆန်တုံနယ်က Qūfùဆိုတဲ့မြို့ကို CONFUCIUS တစ်ယောက်ပဲ ပေးခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်က နေရာတစ်ခုကို နည်းနည်းစီပေးခဲ့ပေမယ့် အသုံးပြုတတ်ရင်တော့ အဲဒီနည်းနည်းဟာ အများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တွေးတောနေတဲ့ နယူတန်ဟာ အဲဒီပန်းသီးကြောင့် ရူပဗေဒပညာရှင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငတ်နေချိန်မှာ ရောက်လာတဲ့ ကြွက်ကို ဒစ်စနီက သတ်မစားခဲ့ပါဘူး! အဲဒီကြွက်ကို အသုံးပြုပြီး အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ကာတွန်းတိုင်းပြည်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ CONFUCIUS ကို အသုံးပြုပြီး Qūfù ဟာ ခရီးသွားတွေမဆဲတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူက ဌေးလိုက်တာ! သူက လှလိုက်တာ! သူက တော်လိုက်တာ! ငါကျတော့ ဘာမှမရှိဘူး ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုပေးတာ နည်းတယ်များတယ်လို့ ညည်းညူကြဖူးလား! သူကျတော့ ရာထူးမြင့်မြင့်နဲ့ ထိုင်တဲ့ခုံက ဆိုဖာခုံ! ငါကျတော့ ခုံစုတ်တစ်လုံးပဲ ရတယ်လို့ မညည်းခင် လီကွမ်ယု စကားကို ပြန်စဉ်းစားမိရင် အော်...ဘုရားသခင် ငါ့ကို ဒီခုံစုတ်ပေးတာ အကြောင်းရှိရမယ်လို့ တွေးမိခဲ့ရင်........
(မြန်မာပြည်ကို ပေးခဲ့ရင်တော့ ထင်းဆိုက်လိုက် မလားပဲ... သံယဇာတ ပေါကြွယ်ဝ ပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်လဲ မရှိပါဘူး.. ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်... ဘာကြောင့်...ဘုရားသခင်ပေးတာ နည်းနေသေးလို့များလား....)
စိတ်ချလက်ချ အိပ်..ပျော်ပျော်ပါးပါး စား..ကျန်းမာစွာ ကျင့်၊ အပြုံးကို အမြဲဆောင် ထားး) အင်တာနက်မှာ ဖတ်ရတာလေး ကြိုက်လို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
0 comments: on "ပေးတာ နည်းနေသေးလို့များလား"